Ma rabtaa ilaalinteena? Maya mahadsanid | Laga soo bilaabo Linux
Ma rabtaa ilaalinteena? Maya mahadsanid
Hyuuga_Neji | | GNU / Linux, Kuwa kale
Waxaan ka mid ahaa kuwa u maleeyay in kaliya Facebook uu yahay shabakadda bulshada ee waxyaabaha aan shaqeynin (tusaale ahaan ciyaaraha TopFace, Farmville iwm) laakiin waxaan arkaa in shabakad kasta oo bulsheed ay leedahay waxyaalaheeda oo ka fog caawinta oo kaliya inay sababaan dhibaatooyin badan.
Ka dib markii aad bil ku qaadatay isticmaalka nidaamka ilaalinta tweet-ka (qufulka ku xiga magaca isticmaalaha) Maanta waxaan kaaga tagayaa qiimeyntayda sida ay ikhtiyaarkani uga fogyahay inuu caawiyo waxa ay qabato ay tahay nasiib darro.
1 Muxuu qufulka Twitter sameeyaa?
2 1- Addoomada Twitter-ka
3 2-Waxaan lahadleynaa kaliya kuwa raacsan
4 3- Waxaan noqon doonaa kuwa raacsan laakiin aan la raacin
5 4- Nabadgelyo liistada ama kooxaha kuwa kale
Muxuu qufulka Twitter sameeyaa?
Tallaabo xagga amniga ah oo dheeri ah, Twitter wuxuu u oggolaanayaa mid kasta oo ka mid ah adeegsadayaasheeda inay "ka ilaashadaan Tweets-kooda" adeegsadayaasha kale ee aan ehelkooda la ahayn, iyagoo ka ilaalinaya adeegsadaha in lagu xuso sheekooyinka dadka aysan aqoon. Tan macnaheedu waa dhaqaajinta xayiraadda koontada oo hab gaar ah u ilaalinaysa waxyaabaha ay tahay in lagu sameeyo adeegsade kasta, taasi waa: hal dariiqo oo dheeri ah oo lagu xaddido cidda na raacaysa iyo cidda aan raacin, laakiin ... runti ma wax baynu helaynaa adoo qufulka dhigaya?
Halkan waxaan ku sharaxayaa sababaheyga sababta ikhtiyaarkani uu uga fog yahay caawinta ... u abuuro dhibaatooyin badan dadka isticmaala waxaanan u maleynayaa inay sax tahay in la caddeeyo in aniga qudhaydu aan qaatay bil dhan isticmaalka ikhtiyaarkan:
1- Addoomada Twitter-ka
Markaad dhaqaajineyso padlock waa inaan aqbalnaa diiwaangelinta dabagalka gacanta waana sababtaas markasta oo qof ama codsi kasta oo ka mid ah asxaabteena Twitter ay rabaan inay na raacaan waa inaan tagnaa goobta si aan go'aan uga gaarno haddii aan aqbalno iyo in kale shaqsi ama codsi ayaa na raaci kara. Maxaa dhacaya haddii midkoodna uusan haysan adeegga ogeysiinta emaylka oo firfircoon? Xaqiiqdii waxaan haystay dhowr jeer
2-Waxaan lahadleynaa kaliya kuwa raacsan
Haddii aan dhaqaajinno ikhtiyaarka si loo ilaaliyo qufulka ka dibna waxaan ku fiicnaan lahayn inaan ku qorno Hashtag (#) ama astaamaha (@) maaddaama Tweets-keena uusan xitaa gaari doonin dadka aan u qorno iyaga mooyee inay horay nagula socdaan wixii aan odhan karaa waxaan lahadli doonnaa kaliya kuwa raacsan. Weligaa ma isweydiisay waxa dhici doona haddii adeegsade cusub oo bilaa bilaa raac ah uu dhaqaajinayo doorashadan?
3- Waxaan noqon doonaa kuwa raacsan laakiin aan la raacin
Haddii aan haysanno qufulka firfircoon oo aan bilowno inaan raacno qof cusub, waxa ugu aaminka badan ayaa ah inuusan qofkani na raaci doonin maaddaama oo la xaddiday Tweets-ka qofkaas ma ogaan doono waxa aan ka hadlayno markaa ma awoodi doonaan inay u mahadceliyaan faallooyin ama ogaadaan inaan xiiseyneyno maxay leeyihiin.
4- Nabadgelyo liistada ama kooxaha kuwa kale
Haddii aan dhaqaajino xulashada ilaalinta Twitter markaa isticmaaleyaasha kale ma awoodi doonaan inay nagu soo dhex urursadaan astaan ​​taas oo kale ah illaa inta isticmaaleyaashu ay yihiin kuwa raacsan.
Uma jeedo inaan wax ka beddelo qaabka uu qof walba u adeegsado akoonkiisa Twitter laakiin ugu yaraan waa ansax in la aqoonsado inay jiraan ikhtiyaarro kasta oo ka fog in laga caawiyo waxa ay samaynayaan waa abuurista dhibaatooyin badan. Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aan awooday inaan la kulmo markii aan tijaabinayay muddo bil ah sida ay tahay waxa ku yaal Twitter-ka adoo adeegsanaya qufulka. Hadda waxaan kugu martiqaadayaa inaad la wadaagto qof walba haddii aad ka hesho xulashooyin badan oo caqli-gal ah sida kuwan oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ma rabtaa ilaalinteena? Maya mahadsanid
Waa faa'iido haddii aad rabto inaad u dirto macluumaad koox gaar ah oo adeegsadayaasha ah iyo inaysan u ahayn kuwa kale kuwa kale.
Tusaale ahaan, waxaan adeegsaday Twitter in muddo ah si aan uga diro digniino nagios, sida iska cad ma aanan xiiseyneynin macaamiisha ama tartamayaasha inay ogaadaan astaamaha qalabka shirkadeyda ama inta dhibic ee aan heysano bishiiba.
Twitter wuxuu abuuraa baahiyo. Baahida loo qabo isgaarsiinta, asal ahaan. Hadda, waad ka tagi kartaa Twitter-ka oo waxaad geli kartaa tusaale ahaan Status.net (sida Identi.ca; ama ka sii wanaagsan, kor u qaad taada) taas oo ugu yaraan ku siin doonta adiga xakameyn dheeraad ah waxyaabahaaga.
Dad yari, sida iska cad; laakiin labadaba waad haysan kartaa. Intaas waxaa sii dheer, dad badan ayaa jooga Identi.ca farsamada oo xiiso leh.
Ama si toos ah u jooji qoraalka.
Ma arko wax micno ah oo aan kaga cabanayo wax ah in la go'doomiyo xisaabaadka iyo maya, looma barbardhigi karo ciyaaraha Facebook.
Waan ogahay .. Identi.ca waxay leedahay isticmaaleyaal badan oo runtii wax ku biiriya waxyaabo xiiso leh ...
Qoraalkani wuxuu iila muuqdaa qanacsanaan weyn aniga, runtii, maxaad filaysay inaad ku ilaaliso koontadaada qolka qufulka? Janno ama wax la mid ah, sidoo kale haddii aad ka warqabto hal-ku-dhigga twitter-ka waxaad ogaan doontaa in dadku sidaa ku sameeyaan akoonadooda oo aysan ka bixin "gabdho ciriiri ah", wadar ahaan, twitter waa in ay la xiriiraan wax kasta iyadoo aan loo eegin sida ay u caqliga xun tahay wuxuu noqon karaa xDDDD
In muddo ah ayaan u isticmaalayay feejignaan dheeri ah kaab ahaanna way uga taajir badan tahay shimbirta. Dadku sidoo kale way ka duwan yihiin (sida ugu fiican 😉), haddii aad rabtona, waxay ka soo xirmayaan aqoonsiga iyo cusboonaysiinta sidoo kale waxay aadaan twitter.
Waxay ila tahay aniga oo marka la ogaado oo la caddeeyo inay jiraan ikhtiyaarro Software oo Bilaash ah oo u dhigma ama ka wanaagsan kuwa lahaanshaha, qofku waa inuu si tartiib tartiib ah u haajira Haddii aadan iskaashi ka samaynin sidii aad u caan bixin laheyd, waxaad la shaqeyneysaa ku tiirsanaantaada goobaha aad ka faa'iideysato, basaasto, xado xuquuqda iyo xaddiddo adeegsadaha
Skype 4.1 ee Linux ayaa la sii daayay.
Linux Mint: sida loo muujiyo liiska isticmaalayaasha ee MDM